I-loft ethokomele eduze kwayo yonke into!
Prévost, Quebec, i-Canada
Inyakatho ihlotshiswe buthule ngezibani zikaKhisimusi, umlingo uqala ekuqaleni kwalo nyaka.
Isifunda saseLaurentians sikunikeza indawo ethokozisayo nenhle lapho ungahlela khona imigubho yakho emihle kakhulu kaKhisimusi.
Noma ngabe uphelezelwa abangani bakho, isithandwa sakho noma umndeni wakho, lesi sifunda saziwa njengendawo yokuqala yokuvakasha!
Indawo yokudlela, izicathulo zeqhwa, ukuslayida, ukushushuluza, sikulindile! Woza uzojabula nathi!
Kungakhathaliseki ukuthi uchwepheshe noma isivakashi, uzothola indawo ethule, ezungezwe imvelo, ezokuvumela ukuthi ushaje amabhethri akho noma ushaje kabusha amabhethri akho.
Indawo yami yokuhlala (3 1/2 umqondo ovulekile) Uhlobo lweBachelor. ifakwe ngokuphelele ihlinzekwa ngombhede wendlovukazi, umbhede we-sofa (okuphindwe kabili) nombhede ogoqayo (owodwa).
Igumbi lokuwasha liyatholakala. Ikhishi lihlome ngokuphelele! ngisho nesitsha se-fondue 😉 Ingasaphathwa eyokuthi unikezwa ukudla kwasemini lapho uqashiswa isikhathi esifushane. Indlu yokugezela ihlanganisa okomisa izinwele, izinsimbi, amathawula okugeza.
Insipho ne-shampoo nazo zihlinzekwa. Uzothola nezingubo zokulala, umduduzi, ingubo yokulala efudumele. Ngezikhathi zakusihlwa ezibandayo ngenkathi; kusukela ngoNovemba kuya ku-Ephreli, indawo yokucima umlilo iyatholakala futhi ngenkokhelo encane yezinkuni.Sikunikeza isikhwama samahhala. (isikhwama esilandelayo samalogi angaba ngu-10 sizolungiswa ngokuvumelana nezintengo zamanje). ungakwazi uma ufisa ukuletha okwakho, kungokubona kwakho. Ngokuya ngesizini, i-BBQ yethu kanye nendawo yethu encane yokucima umlilo ingasetshenziswa kuwe.
I-TV ene- I-Netflix, I-Chromecast
Amakhilomitha ayi-13 ukusuka eSaint-Jérôme kanye ne-8 km ukusuka eSaint-Sauveur uzothola amabhikawozi, izitolo zamakhekhe, amathilomu amancane, izimakethe zomphakathi, izindawo zokudlela, izindawo eziningi ezithambekayo nokunye okuningi!
Ngokuhlala kule ndawo yokuhlala engenhla, ngizobe nginakho konke okusemandleni akho! Ngitholakala kangcono ngomlayezo wombhalo noma nge-Airbnb. Kodwa uzokwazi ukufinyelela ifoni yami yangasese uma udinga ukungithola ngokushesha. Kuyoba yintokozo yami enkulu ukuphendula imibuzo yakho lapho weluleka khona phakathi nohambo lwakho! Enjabulweni!
Ngokuhlala kule ndawo yokuhlala engenhla, ngizobe nginakho konke okusemandleni akho! Ngitholakala kangcono ngomlayezo wombhalo noma nge-Airbnb. Kodwa uzokwazi ukufinyelela ifoni ya…
Hlola ezinye izinketho ezise- Prévost namaphethelo